Ukuvela: icandelo le-Intanethi kwintengiso yemasheya | Ezezimali
Ukuvela: icandelo le-Intanethi kwimarike yemasheya
I-Intanethi yaseYurophu sisalathiso esiqokelela ikowuteshini yezona nkampani zibalulekileyo kweli candelo lobuchwepheshe kwilizwekazi elidala kwaye, kubandakanya iinkampani ezidityanisiweyo ziye kwabanye kwinkqubo yolwandiso. Nangona isibonelelo esibonelelwa leli candelo lentengiso yesitokhwe ngokucacileyo singaphantsi kwezo zinikezelwa ngoku Iingxowa zaseNyakatho Melika okanye zaseJapan, zombini kumgangatho nakubungakanani. Ngayiphi na imeko, yenza enye indlela kukhetho lwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwicandelo, kuyinyani ukuba ukusebenza kwayo kwiimarike ze-equity kuthwala umngcipheko omkhulu.
Ezona nkampani ziphambili kwi-Intanethi zibekwe ngokwamaqela kwisalathiso sobuchwephesha bobuchwephesha ukuze bonke abatyali mali bakwazi ukusebenza kuzo, emva kwesikhewu esiphawulwe okoko kugqobhoza iteknoloji. Iminyaka eliqela, baphinda bazidibanisa kwinto ebizwa ngokuba yi-Intanethi yeYurophu, apho kubonakala khona ukungabikho kweenkampani zaseSpain. Akumangalisi ukuba, akukho nanye kwezi mpawu zidweliswe kwimarike yesizwe eqhubekayo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, ngekhe kubekhona ukhetho ngaphandle kokuya kwi Enye indlela yokuThengisa (MAB) ukufumana inkampani enale nkangeleko.
Uninzi lwale ntengiso ayaziwa kubatyali zimali zentengiso kuba uninzi lwazo lukhona iinkqubo zokwandisa. Ngokuxabisa okunzima ngakumbi kwiimarike ze-equity ngenxa yeempawu zayo ezizodwa. Ngaphandle koku, isithembiso sikude kakhulu kunaleso sinikezwe yiWall Street, yenye yezona zinamandla emhlabeni. Zombini ngenani kunye nomgangatho nangaphambi kokunikezelwa kweJamani kunye neJapan oko kunokuba yinotshi enye ngezantsi. Apho ukungazithembi kuyinto eqhelekileyo kwizenzo zabo, umahluko obanzi phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona isezantsi.
1 Indlela yokutyala imali kwi-Intanethi
2 Igalelo kolu tyalo-mali
3 Abahambisi izabelo
4 Akukho kubonakaliswa kwintengiso yesitokhwe yaseSpain
5 Thatha izikhundla kwezi nkampani
Indlela yokutyala imali kwi-Intanethi
Licandelo elinokuguquguquka kakhulu, apho ingezizo zonke iinkampani ezidweliswe kwizabelo ezilawulwa yimithetho efanayo yemarike yemasheya. Zilunge kakhulu kwimisebenzi yokusika yokuqikelela okanye nokuba yenzelwe phuhlisa iintshukumo kwangolo suku lunye okanye ngaphakathi. Ngayiphi na imeko, azifanelekanga kwaphela ukuzenza ngexesha eliphakathi okanye elide ngenxa yomngcipheko ezibandakanya wona kolu hlobo lomsebenzi. Kwelinye icala, babonakaliswa kukutshintsha okunamandla kwixabiso labo kwiimarike zezabelo apho badweliswe khona.
Ngelixa ngokuchaseneyo, banokuvelisa ifayile ye- ipotifoliyo enobundlobongela kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Njengomphumo wolu phawu, kunokuthiwa olu didi lwezokhuseleko olukhethekileyo alufanelanga kuzo zonke iiprofayili zabagcini kuba zinokubangela enye ingxaki kulawulo lwezikhundla zabo. Njengoko kwenzekile kule minyaka idlulileyo, apho kuye kwakho iimeko apho abatyali mali bashiye i-euro ezininzi ngasemva. Umngcipheko wakho, ke ngoko, uphezulu kakhulu kunolunye ukhuseleko.
Igalelo kolu tyalo-mali
Ixabiso elidityaniswe kwicandelo le-Intanethi lahlukile kuba lichazwe kakuhle kwaye libenza bahluke kwabanye amacandelo emveli ngakumbi. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba zeziphi iimarike zezabelo. Ayizizo zonke ezisemthethweni ukuhlangabezana nale mfuno. Akumangalisi ke ukuba ubonelelo lweemarike zentengiso zaseYurophu lusilela xa kuthelekiswa nesindululo semarike yestokhwe saseNyakatho Melika naseJapan. Akukho nokhuseleko kweli candelo elisebenza ngokulingana eSpain. Alikho elinye icebo ngaphandle kokuya kutshintshiselwano lwesitokhwe lwaseJamani, lwaseFrance okanye lwase-Italiya ukuze wenze eminye imisebenzi yokuthenga nokuthengisa kwimarike yemasheya.
Kwelinye icala, ayilibale ukuba amathuba okuhlaziya kula maxabiso ezabelo zamazwe ngamazwe makhulu kakhulu ngenxa yeempawu zawo ezizodwa. Kodwa kunye nomngcipheko omkhulu kakhulu wokuhla ngexabiso elithile kunye nokuphulukana nenxalenye elungileyo yoqingqo-maxabiso kwiimarike zezemali. Lo ngumbandela ekufuneka uthathelwe ingqalelo xa uqesha isihloko sakho kwaye uphephe isimanga esingaqhelekanga kuvavanyo lwakho. Njengoko kwenzekile kwiminyaka edlulileyo kunye nolunye ukhuseleko kwicandelo le-Intanethi.
Olunye uphawu lwala magunya akhethekileyo kukuba ziinkampani ezidwelisiweyo ezingahambisi nayiphi na intlawulo yesahlulo. Oko kukuthi, ngabo awunakufumana ukubuya okungaguquguqukiyo kwaye kuqinisekisiwe minyaka le. Ngokuyinxenye kuba ziinkampani okwangoku abafumani zibonelelo kwingxelo yengeniso yeshishini. Le yinto ebaphazamisayo ngandlel 'ithile yomdla ebusweni babatyali abazikhuselayo okanye abatyalomali kwiimarike zezemali. Ngubani ofuna ukwenza ipotifoliyo yengeniso esisigxina ngaphakathi kokungafaniyo kwaye ngokolu didi lweenkampani abakwazi ukufikelela kwiinjongo zabo ezinqwenelekayo.
Kwelinye icala, licandelo lemarike yemasheya, ethi nangona inomdla omkhulu kubatyali mali kwaye inekamva elininzi phambi kwayo, kuyinyani ukuba icacisiwe ngaphezulu xa kuthelekiswa namanye amacandelo esitokhwe. Ngamaxesha athile ngamaxabiso angaphezulu kokulindeleyo kwiimarike ze-equity kwaye oko kunokuvelisa ukusikwa okunamandla okanye izilungiso ngokuhambelana namaxabiso abo. Oku kubenza ukuba babonakale ekuboneni umahluko obanzi abawubonisayo phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye namaxabiso asezantsi kwaye banokufikelela kumanqanaba aphezulu nangaphezulu kwe-5% kwiseshoni enye yorhwebo. Ke kuya kufuneka ulumke ngakumbi xa uthatha izikhundla kubameli bakho.
Akukho kubonakaliswa kwintengiso yesitokhwe yaseSpain
Ewe, kubonakala ngathi ayinakucingelwa kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo kwaye ngakumbi esiphelweni se-2019 ukuba isalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe ziya kufikelela kumanqanaba asondele kumanqaku angama-9.600. Kodwa inyani kukuba isalathiso esikhethiweyo siyifumene emva kwayo yonke loo nto, nangona ngaphandle koncedo lwecandelo le-Intanethi kwimarike yemasheya. Kungenxa yokuba abakho kwasekuqaleni. Kuphela ngamaxesha apho Terra Ibe yenye yezona 35 zibalaseleyo zeSpanish, kodwa iphela ngendlela esikhumbula ngayo sonke. Emva kokunyuka malunga nee-euro ezingama-150 isitokhwe sawa saza saphuma kwisalathiso sesizwe.
Eli kuphela kwamava alo naliphi na ixabiso eligcine uhlobo oluthile loqhakamshelwano kunye necandelo le-Intanethi kwaye ewe khange lilunge kakhulu kwicandelo elikhulu labatyali mali abancinci nabaphakathi. Ukuba akunjalo ngokuchaseneyo, ngokucacileyo yayidanisa kuba ii-euro ezininzi bezisele endleleni, kwaye ngaphandle komngcipheko ocacileyo obandakanyekayo kwizenzo zabo kwiimarike zezemali. Olu luhlalutyo ekufanele ukuba kuthathwe kulo iziphumo ezininzi kule minyaka izayo njengoko licandelo elivelayo ngokucacileyo nelinekamva elizayo.
Thatha izikhundla kwezi nkampani
Ukuba nangasiphi na isizathu oyena mnqweno wakho kukuvula izikhundla kwinkampani enezi mpawu zikhethekileyo, awuzukukhetha ngaphandle kokulandela izikhokelo zokuziphatha ukukhusela imali yakho ekhoyo kwizabelo. Ayothusi into yokuba ungaphulukana nokuninzi ukusukela ngoku, njengoko amava kwiminyaka yakutshanje ekubonisile. Ngothotho lweengcebiso ekufuneka uzenzile ngoqeqesho oluthile kunye nedosi elungileyo yobungqongqo kutyalo-mali. Njengakula manqaku alandelayo esikubhenca apha ngezantsi:
Awuyi kukhetha kodwa Yiya ngapha kolwandle, kwiimarike zamanye amazwe, ukuhlangabezana nale mfuno ikhethekileyo. Ngokukodwa, kwizikwere ezibekwe eUnited States, kulapho la maxabiso sithetha ngawo okwangoku egxile ikakhulu.
Su ukuguquguquka ihlala igqithisile kwaye nangayiphi na imeko iphezulu kunaleyo iboniswa zezinye iimarike zesitokhwe kurhwebo lwamazwe ngamazwe. Apho kufuneka khona ukuba uyazi ukuba ungasebenza njani nolu hlobo lwezindululo zeemarike zentengiso.
Isithembiso asibanzi kakhulu, nangona lelinye lamacandelo akhule kakhulu kule minyaka idlulileyo, njengoko kusengqiqweni ukucinga ngenxa yeempawu ezikhethekileyo. Ayililo icandelo lokungenisa, kodwa ngokuchaseneyo iyavela Ayifani.
Uya kuvezwa iimvakalelo ezintsha Kwiimarike zeemali zamashishini ezingenanzala emisiweyo ekubeni ezokhuseleko zilawulwa ziikhrayitheriya ngaphandle kwalawo amanye amacandelo eshishini adweliswe kuthengiso lwezitokhwe lwamanye amazwe.
Njengakuwo onke amacandelo kwiimarike zemali, kukho amaxabiso angcono kunamanye kwaye kulapho izigqibo zakho kufuneka zijolise khona ukusukela ngoku. Ngaphezulu kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha.
Kwaye okokugqibela, kuvavanye ukuba ziinkampani ukuze zingabinazo ixesha elide. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, kufuneka babe njalo ixesha elifutshane kakhulu lokuhlala. Ngokukhawuleza ukuba unenzuzo, kuya kufuneka uyiphelise imisebenzi ukuze ukonwabele ukuzuza kwemali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Ukuvela: icandelo le-Intanethi kwimarike yemasheya
Ukwenza njani ukuthenga engxoweni?
Iimpawu eziza kubonisa ukwehla kwintengiso yemasheya